နေပြည်တော်ဒီဇိုင်း (၂)။ (မသန်မစွမ်းသူများကဏ္ဍ)
နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ လွှတ်တော်အဆောက်အဦးကြီးဟာ အင်မတန်ခန့်ညားပြီး စနစ်ကျနတဲ့အကြောင်း ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီက လွှတ်တော်အမတ် ဦးခင်ရွှေ ရေဒီယိုတခုမှာ ပြောသွားတာကြားရတယ်။ အမြင်အရ လည်း အတော်လည်းကြီး ကျယ် ခန်းနားပါတယ်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကတောင် မနာလိုဖြစ်ရလောက်အောင် ကြီးကျယ်အောင် ဆောက်ထားတဲ့ လွှတ်တော်လို့ ဆိုနိုင်တယ်။ ဒါတင်မကပါဘူး။ နေပြည်တော်မြို့တော်သစ်မှာ တခုလုံး၊ ၀န်ကြီးဌာနရုံးတွေ၊ ပန်းခြံဥယျာဉ် တွေ၊ ရေကန်ရေပန်းတွေ၊ ဂေါက်ကွင်းဆိုလည်း ၂-ခု စသဖြင့် ငွေကုန် ကြေးကျအမြောက်အများ အကုန်ခံပြီး ဆောက်ထား တာ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားမှာ နေ့တိုင်းလိုလိုတွေ့ နေရတယ်။
ဒါပေမယ့် ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်းမှာ ကိုထက်အောင်က ရေးခဲ့ဖူးတယ်။ နေပြည်တော်ဆိုတာ "အတုအယောင်မြို့၊ အသက်ဝိဉာဉ် ကင်းမဲ့နေတဲ့မြို့၊ လူမှုရေးအရ တုံ့ပြန်ဆက်သွယ်မှု ကင်းပနေတဲ့မြို့" (Synthetic, soulless and (town) desperately devoid of social interaction) ဆိုပြီး ရေးခဲ့ဖူးတယ်။ အခု ဇန်န၀ါရီလ ၃၁ ရက်နေ့က လွှတ်တော်စတော့ ကျနော် စပ်စပ်စုစု သိချင်နေတဲ့ကိစ္စတခုရှိတယ်။
ဒီလိုနဲ့ လွှတ်တော်ထဲ ရောက်နိုင်သူတွေကိုလည်း ကျနော်လူကြုံနဲ့ မေးရတာ အမောပါ။ ကျနော်သိချင်နေတာက ဒီလွှတ်တော်အဆောက်အဦကြီးမှာ မသန်မစွမ်းသူတွေ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ကိရိယာ၊ တန်ဆာပလာ တွေ ပါသလား ပေါ့။ ရန်ကုန်ဆိုတာက မြို့ဟောင်းကြီးဆိုတော့ ထားပါတော့။ ပြင်ရဆင်ရ ခက်ခဲတယ်။ နေပြည်တော်ဆို တာက မြို့တော်သစ်ဆိုတော့ မြို့အသစ်၊ အဆောက်အဦအသစ်တွေမှာ ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေက ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ရ မခက်ပါဘူးလို့ ထင်မိတယ်။ မြို့တော်သစ်ကြီး တည်ဆောက်တဲ့အခါ ခေါင်းဆောင်တွေက ဦးဏှောက်ပြေးရင် ပြေးသလို ပိုလို့ အရည်အသွေးကောင်းအောင်၊ မြင့်အောင်တည် ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေ တဲ့မြို့၊ အဆောက်အဦတွေဆိုလည်း စွမ်းအင်လောင်စာ သိပ်မသုံးရတဲ့ဒီဇိုင်း (energy efficient design) စသဖြင့် တည်နိုင်သေးတယ်။ (ဆိုလိုတာက သဘာဝအလင်းရောင်သုံးတာ၊ မလိုအပ်ရင် အဲယားကွန်ဒီးရှင်းတွေ သိပ်မသုံးရတာ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေ နည်းအောင် စသဖြင့် ကြံဆတည်ဆောက်တဲ့ ဒီဇိုင်းမျိုးပါ။) ဒီနေရာမှာ ကျနော်ပြောတဲ့ မသန်မစွမ်းသူ တွေအတွက် တန်ဆာပလာ (disabled facilities) တွေဆိုတာကတော့ မျက်မမြင်တွေသွားလာနိုင်ဖို့ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ အမှတ်အသား အဖုကလေးတွေ၊ ဘီးတပ်ကုလားထိုင်နဲ့ သွားလာနိုင်ဖို့ ဆင်ခြေလျောတွေ၊ သူတို့သုံးဖို့ ရေအိမ်ဆိုလည်း ပိုမို ကျယ်ဝန်းတဲ့ ရေအိမ်၊ အဆောက်အဦး ၂-ထပ်ဖြစ်လာရင်လည်း အပေါ်တက်ဖို့ ဓာတ်လှေကားတွေ စသဖြင့်ပါ။
ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ဒီကိစ္စတွေ ကျနော်စိတ်ဝင်စားလာသလဲဆိုတော့ အမေရိကန်၊ ၀ါရှင်တန်မြို့မှာ ရှိနေစဉ်က ဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲ တခုကို ရောက်ရာက အတွေးဖြစ်လာမိတာပါ။ ဂီတပွဲမှာ ပျော်နေသူတွေ ပျော်နိုင်သလို၊ မသန်မစွမ်း သူတွေလည်း ပျော်နိုင် အောင် လက်သင်္ကေတနဲ့ အခုဆိုနေတာ ဘာသီချင်းပါ ဆိုတာမျိုး တယောက်က သင်္ကေတပြနေတာ တွေ့တော့ ကျနော် ကြည်နူးလိုက်ရတာ၊ လူသားဘ၀ရဲ့ အရည်အသွေး (quality of life) ဆိုတာ ဒါပါလား... ဆိုတာလည်း သဘောပေါက်လာ မိတယ်။ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံတွေမှာက မသန်မစွမ်းတဲ့ သူတို့တွေအတွက် ကားတွေမှာလည်း ဘီးတပ်ကုလားထိုင်တက် နိုင်အောင် လုပ်ထားပေးရတယ်။ ကားရပ်ဖို့ နေရာမှာတောင် သူတို့အတွက်နေရာသီးသန့်၊ အဲဒါအပြင် ကိစ္စအများမှာ သူတို့ ကို မသန်မစွမ်းသူဖြစ်လို့ ခွဲခြားဆက်ဆံတယ်၊ နှိမ်တယ်ဆိုရင်တောင် အစိုးရအထိ တရားစွဲဆိုနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေ ရှိကြတယ်။ ဂျပန်လို နိုင်ငံမှာလည်း ဒီလိုမသန်မစွမ်းတွေအတွက် တန်ဆာပလာတွေ ထားပေးတာ တွေ့ရတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာ တွေ့ ရတော့ ကျနော်အံ့သြနေတယ်။ ဒါပေမယ့် တရုတ်မိတ်ဆွေက ပြောတယ်။ ဒါဟာ Housing code (အိမ်ဆောက် ရင် လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်း) တွေလေတဲ့။ အဆောက်အဦးတွေ၊ လမ်းတွေ၊ ရုံးတွေ ဆောက်တိုင်း မဖြစ်မနေ လိုက်နာရမယ့် ဥပဒေပြဌာန်းထားလို့ လိုက်နာဆောင်ရွက်တာလို့ ပြောတယ်။ သူတို့တွေက ဒီလိုတန်ဆာတွေ ရှိနေလို့ ရှိနေမှန်းတောင် သတိ မထားမိကြဘူး။ တခါက ဒီအကြောင်းစကားစပ်မိလို့ ပြောတဲ့ ဗွီအိုအေက ဦးဝင်းအောင်ကြီးကလည်း သူရုရှားမှာ နေခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံအရ ရုရှားမှာလည်း အခုလို မသန်မစွမ်းတွေ အတွက် တန်ဆာပလာတွေရှိကြောင်း ဖလှယ်ဝေငှလာ တယ်။ သူက "ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးတော့ စစ်နိုင် ပေမယ့် ဆိုဗီယက်ယူနီယံမှာ ဒုက္ခိတစစ်သားတွေ၊ မသန်မစွမ်းသူတွေ အများကြီး ကျန်ခဲ့တယ်။ သူတို့အတွက် မဖြစ်မနေ လုပ်ပေးရတာ" လို့ ရှင်းပြတယ်။
တကယ်တော့ လူဆိုတာ အိုနာတတ်ကြတော့ တချိန်အိုရင်၊ နာရင် ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေ မခံစားရ မရှိလေ အောင် လုပ် ထားတာလို့လည်း သဘောပေါက်မိတယ်။
အကြင်နာကင်းကင်း မြို့ကြီး နေပြည်တော်
ဒီလိုနဲ့ နေပြည်တော်အကြောင်း မိတ်ဆွေတွေကို မေးကြည့်တယ်။ ၀န်ကြီးဌာနရုံးတွေမှာ အဲသလို မသန်မစွမ်း သူတွေ အတွက် တန်ဆာပလာတွေ ထည့်သွင်းထားတာ မရှိဘူးဆိုတာ ရောက်ဖူးသူတွေက ရှင်းပြကြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ မသန်မစွမ်းသူတွေအရေး လှုပ်ရှားနေသူတဦးနဲ့ တွေ့တော့ သူက ပြောပြတယ်။ "လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန် လည်နေရာ ချထားရေး ၀န်ကြီးရုံးမှာတော့ ကျနော်တို့ တိုက်တွန်းတောင်းဆိုလို့ ထားပေး ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ၀န်ကြီးဌာနတွေ မှာ မရှိပါဘူး" တဲ့။ ရှိတဲ့ လူမှုဝန်ထမ်းဝန်ကြီးဌာနမှာတောင်မှ အခုလို ဘီးတပ်ကုလားထိုင် တက်နိုင်တဲ့ ဆင်ခြေလျောတွေ က ယာယီသဘော အလျှင်ထားတာ၊ ပွဲလမ်းရှိမှသာ တတ်ဆင်တယ်။ မရှိတဲ့ အချိန်ဖြုတ်ထားတယ်တဲ့။
ဒီလိုနဲ့ အခု လွှတ်တော်အဆောက်အဦသစ်ကြီးအကြောင်း မေးကြည့်မိတယ်။ " ခင်ဗျားဗျာ... စိတ်ကူးယဉ် လိုက်တာ" လို့ မေးခံရသူ မိတ်ဆွေက ကျနော့်ကို ဝေဖန်တယ်။ "အခု လွှတ်တော်အမတ်တွေ လှေခါး လျှောက်တက်နေရတာ တီဗွီမှာ မြင်တယ်မဟုတ်လား" လို့ ပြန်ပြောပြတယ်။ လွှတ်တော်အမတ်တွေက အဆောင်ကနေလာရင် ကားစီးလာ၊ ကားက ငလိုက်ချောင်းကိုဖြတ်ထိုးထားတဲ့ တံတားတဖက်မှာ ရပ်ကြရတယ်။ ပြီးတော့ တံတားကိုဖြတ် တဖာလုံနီးပါးလောက် လမ်းလျှောက်ကြရတယ်။ လုံခြုံရေး စစ်ဆေးခံ၊ အတွင်းရောက်မှ တခါ ဘတ်စကားထပ်စီးရတယ်။ လွှတ်တော် အဆောက် အဦကြီးကိုတော့ မသန်မစွမ်းသူ တွေအတွက် ဆင်ခြေလျှော မပြောနဲ့၊ အခု သူတို့သမ္မတတွေ၊ သက်ကြားအို စစ်ခေါင်း ဆောင်တွေတောင် လမ်းလျှောက် တက်နေရတယ်ဆိုပြီး ရှင်းပြလေတယ်။ လွှတ်တော်ဒီဇိုင်းကပါ ပြဿနာ ရှိလာလေပြီ လားလို့ ထင်မိတယ်။ အခုလွှတ်တော် အဆောက်အဦးဆောက်ဖို့ လုပ်ကြတော့ အတွင်းရေးမှူး (၁) သီဟသူရ ဦးတင် အောင်မြင့်ဦးက ကြီးကြပ်ရတယ်။ အခု ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ် နာမည်တင်သွင်း အတည်ပြုခံရတဲ့ ဦးတင့်ဆန်း အပိုင် ACE ကုမ္ပဏီက ကန်ထရိုက်ရတယ်။
ကျနော်စဉ်းစားမိတာကတော့ လွှတ်တော်ဆိုတာက နိုင်ငံခြားခေါင်းဆောင် ဧည့်သည်တွေလည်း လာနိုင်တယ်။ ဒီအခါ ပေါ်တီကို (ဆင်ဝင်) အောက်အထိ ကားတက်လို့ ရနိုင်တဲ့အနေအထား ဖြစ်သင့်တယ်။ ကားတံခါး ဖွင့် ဆင်း၊ တခါထဲ အဆောက်အဦးထဲဝင် ဆိုတာမျိုး ဖြစ်သင့်တယ်။ လုံခြုံရေးအရလည်းကောင်း၊ ပိုလည်း သင့်မြတ် တယ် ထင်မိတယ်။ အခုတော့ နိုင်ငံရပ်ခြားက ခေါင်းဆောင်တွေလာရင်တောင် တဖာလုံလောက် လမ်းဆင်း လျှောက်ရတော့မယ်။ တခါ လွှတ်တော်ကိုရောက်ဖို့ လှေခါးထစ်တွေ ထပ်ပြီး ဟောဟဲလိုက် တက်နေရ တော့မယ်။ (ချွင်းချက်။ အမျိုးသားလွှတ်တော် အဆောက်အဦးတခုမှာတော့ ဆင်ဝင်ထဲ ကားတက်နိုင်တဲ့ ဒီဇိုင်း ပုံစံရှိတာ တွေ့ရတယ်။ ကျန်တဲ့ လွှတ်တော်ပင်မအဆောက် အဦးကြီးမှာတော့ မရှိဘူး)။ (အဲဒါအပြင် ဖွဲ့စည်းပုံ အရလည်း ပြဿနာရှိနေတယ် ထင်မိတယ်။ နိုင်ငံအများမှာ သမ္မတအိမ် တော်တွေကို သီးသန့်တခမ်းတနား ထားကြတယ်။ အမေရိကန် သမ္မတအိမ်ဖြူတော်လိုဟာမျိုးပေါ့။ အခုတော့ သမ္မတ အိမ်တော်၊ ဒု-သမ္မတ အိမ်တော်တွေကို လွှတ်တော်ဝင်းထဲ စုထားတာ တွေ့ရတယ်။ သမ္မတရုံးသီးသန့်လိုမျိုး နေရာခွဲခြား မထားဘူး။ အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌတွေထိုင်တဲ့ရုံးကျတော့ လွှတ်တော်ဝင်းအပြင်ပမှာ သီးခြား ကြီး ရောက်နေပြန်တယ်။ စကားချပ်)
တကယ်တော့ အခုလွှတ်တော်တည်ထားပုံက မသန်မစွမ်းသူတွေအရေး လုံးဝထည့်စဉ်းစားထားပုံ မရှိဘူးလို့ ကျနော်မြင်မိ တယ်။ တကယ်တော့ နေပြည်တော်တခုလုံးကလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့ပုံ မရှိပါဘူး။ သူတို့အတွက် အကြင်နာခပ် ကင်းကင်းလို့ ပြောရင်တောင်ရတယ်။ မကြာသေးမီ ရက်ပိုင်းက လွှတ်တော်မှာ ဆွံ့အ နားမကြားသူတွေအတွက် ရုပ်မြင် သံကြားမှာ ဟန်ပန်သင်္ကေတသုံးထုတ်လွှင့် ပေးဖို့ အောက် လွှတ်တော် အမတ် ဦးကြည်မြင့် (လသာ) မေးခွန်းထုတ်တာ ကြားရတော့ သူ့ကို ချီးကျူးမိသေးတယ်။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းကတော့ ဒီဟန်ပန်သင်္ကေတကိုလည်း မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ဖတ်တတ်သူနည်းပါတယ်တဲ့၊ အဆင် သင့်ရင် လုပ်ပေးပါ့မယ်တဲ့။ (တကယ်တော့လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆွံ့အနား မကြားကျောင်း -၂ (အစိုးရ-၁၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း-၁) သင်တန်းသား (၁၆၄+ ၁၃၀) ပဲ ရှိတာ မဟုတ်လား)။
သူတို့အရေးကိစ္စ ဘာဖြစ်လို့ ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်ပြောနေရသလဲလို့ မေးခွန်းထုတ်စရာ ရှိတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း နိုင်ငံ တကာမှာ သူတို့ကို မသန်မစွမ်းသူ (disabled) လို့တောင် မခေါ်ကြတော့ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် တနည်း တဖုံအားဖြင့် သန်စွမ်းသူများ (differently abled) လို့ ပြောင်းခေါ်လာကြတယ်။ အခြေအနေတခုခုကြောင့် ကိုယ်ကာယ မသန်စွမ်းမှုရှိမယ်။ အခြားတနေရာရာ၊ တကဏ္ဍမှာတော့ သူ့ထက်ကဲ တနည်းနည်း စွမ်းဆောင်နိုင်သူများလို့ ဆိုချင်ပုံရ ပါတယ်။ တကယ်တော့ သူတို့အားလုံးဟာ လူသားတွေဖြစ်တဲ့ အလျောက် လူသားပီပီ၊ အခြားသူများခံစားရနိုင်သလို သူတို့လည်း ရပိုင်ခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ လူတိုင်းက မဲပေးနိုင်၊ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံနိုင်ရင် သူတို့လည်း မဲပေးပိုင်ခွင့်၊ ရွေးချယ်တင် မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်၊ အမတ်ဖြစ် ပိုင်ခွင့်၊ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ အနည်းဆုံး အစိုးရနဲ့ပတ်သက် တဲ့၊ ပြည်သူအများနဲ့ ပတ်သက် တဲ့ ရုံးပြင်ကန္နားအားလုံးမှာ သူတို့သွားရောက် ထိတွေ့နိုင်ခွင့် မရှိရ မဖြစ်စေရလေအောင် အခုလို မသန်မစွမ်း သူများ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ တန်ဆာပလာတွေကို ထည့်သွင်း ထားပေးဖို့ တိုက်တွန်းနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူအများက သတင်းသိရှိပိုင်ခွင့် ရှိသလို၊ သူတို့လည်း သိရှိပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် ရုပ်မြင်သံကြားတွေမှာ သင်္ကေတ ဟန်ပန်သုံး ဖော်ပြပေးကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မသန်မစွမ်းသူအရေအတွက်က မနည်းပါဘူး။ ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (UNDP) က လူဦးရေရဲ့ ၂.၉% ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတယ်။ (အစိုးရစာရင်းတွေအရ လူဦးရေ ၃. ၃၂% ရှိပါတယ်)။ အဲသည်တော့ ခန့်မှန်း လူဦး ရေ ၃-သန်းလောက်က ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ကိုယ်ကာယ တနည်းတဖုံ ချို့ယွင်းကြတယ်လို့ ဆိုနိုင်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ လူမှု ဖူလုံရေး၊ ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင် ထွန်းခိုင် အဆိုအရတော့ ၂.၃ သန်း ရှိတယ်လို့ မြန်မာ တိုင်းမ်စ် သတင်းစာမှာ ဖတ်ရပါတယ်။ ဒီအထဲကမှ အများစု (၅၅%) ဟာ အသက် ၁၆ နဲ့ ၆၅ ကြားတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မသန်မစွမ်းသူများ၏အခြေအနေပြ ပုံ
သူတို့အများစုဟာ ဘ၀အခြေအနေ တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်း အတော်နည်းပါးပါတယ်။ အစိုးရ ၀န်ကြီးဌာနကိုယ်၌ကလည်း ဘတ်ဂျက်မှာ ဦးစားပေးတာ မခံရပါဘူး။ ရန်ပုံငွေ မဖြစ်စလောက်နဲ့ လည်ပတ်နေရတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ မသန်မစွမ်းသူများအသင်း (Myanmar Physically Handicapped Association--MPHA) က တာဝန်ခံတဦး က "မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေတဲ့ မသန်မစွမ်းသူတွေရဲ့ တ၀က်ကျော်က အသက် ၁၆ နဲ့ ၆၅ ကြားတွေပါ။ ဒီအသက်အုပ်စုဟာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွက် သိပ်အရေးပါပါတယ်။ သူတို့သာ သန်စွမ်းနိုင်ကြရင် နိုင်ငံအတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ကြမှာ ပါ။ အခုတော့ မသန်မစွမ်းသူတွေကို အသိ အမှတ်မပြုကြသလို၊ အလုပ်ရဖို့လည်း ခက်ပါတယ်။ အစိုးရက သူတို့တွေ အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း တွေ စီစဉ်ပေးသင့်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းတွေလည်း ပေးသင့်ပါတယ်" လို့ အကြံပြု ပြောခဲ့တာ အလဲဗင်း ၀ိကလီမှာ ဖတ်ခဲ့ရဖူးတယ်။ တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ မသန်မစွမ်းသူ ၈၅% မှာ အလုပ်အကိုင် မရှိကြပါဘူး။ သူတို့ဘာသာ ရှာကြံရပ်တည်နေကြရပါတယ်။ အခုလို မသန်မစွမ်းသူတွေထဲမှာ စစ်တပ် အတွင်းက မိုင်းကြောင့်၊ ဒဏ်ရာကြောင့် မသန်မစွမ်းဖြစ်လာသူ ရဲဘော်ဟောင်း တပ်ဖွဲ့ကြီးကလည်း အင်အား ထပ်ဖြည့်နေ ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမြင်အာရုံချို့ယွင်းနေသူတွေအတွက် ကျောင်း ၃-ခု (အစိုးရ-၂၊ ကျောင်းသား ၁၄၄ ဦး)၊ အကြားအာရုံ ချို့ယွင်းနေသူတွေအတွက် ကျောင်း ၂-ခု (အစိုးရ-၁ ကျောင်းသား ၁၆၄+ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၁)၊ ဉာဏ်ရည်ချို့တဲ့သူတွေ အတွက် ၁ ကျောင်း၊ အထွေထွေ ချို့တဲ့သူတွေအတွက် တကျောင်းပဲ မသန်မစွမ်းသူ တွေအတွက် ပညာရေး စီစဉ်ထားတာ ရှိပါတယ်။ သူတို့အတွက် အထူးပြုကျောင်းတွေဆိုတာလည်း မရှိ သလောက်ပါ။ ဒီကိန်းဂဏန်းတွေက တပ်မတော်အစိုးရ လက်ထက် နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှတ်တမ်း (၂၀၀၉ အထိ) ဆိုတဲ့ စာအုပ်က ရယူထားတာပါ။ တကယ်ရှိနေတဲ့ မသန် မစွမ်းသူတွေရဲ့ တကယ့်အနည်းအကျဉ်းမျှ ကို သာ ၀န်ထမ်းပေးနိုင်တာကို တွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မသန်မစွမ်းသူများအရေး ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့သူတွေက မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ မသန်မစွမ်း သူများအခွင့် အရေး နိုင်ငံတကာ သဘောတူညီချက် Convention on the Rights of Person Disabilities (CRPD) ကို လက်မှတ်ရေး ထိုးဖို့ တိုက်တွန်းနေကြတာ ကြာပါပြီ။ အခုအချိန်အထိ မြန်မာအစိုးရဖက်က မကြားနိုင်သေးပါဘူး။ အလေးထား စဉ်းစား တာ မရှိသေးပါဘူး။ ၀မ်းနည်းစရာပါ။ အဲဒါအပြင် မသန်မစွမ်းသူတွေ အခွင့်အရေးအတွက် အထူးပြဌာန်းပေးထားတဲ့ ဥပဒေတွေလည်း မရှိပါဘူး။ အကယ်၍ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ CPRD သဘော တူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် (လာမယ့်နှစ်) မှာ မသန်မစွမ်းသူတွေရဲ့ ၆၅% ကို အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးပေးရဖို့ အကြောင်းရှိနေပြီး၊ သူတို့အခွင့်အရေးတွေ ကိုလည်း လေးစား လိုက်နာရမှာမိုလို့ပါ။ အစိုးရတရပ်ရဲ့ တာဝန်ကို ရှောင်ချင်တာလည်း ပါပါလိမ့်မယ်။
MPHA ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြတ်ဦးကတော့ "မသန်မစွမ်းသူတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို အာမခံပေးမယ့် ဥပဒေတွေ မရှိပါဘူး။ ကျနော် တို့ကတော့ မသန်မစွမ်းသူတွေ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ့် ဥပဒေပြဌာန်းချက်တွေ ရှိလာစေဖို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်" လို့ မျှော် လင့်အိပ်မက်နေတာ မြန်မာတိုင်းမ်စ် ဂျာနယ်မှာ ဖတ်ခဲ့ရတယ်။
အခြားနိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာဆိုရင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတောင် မသန်မစွမ်းသူတွေရဲ့အရေး ဖက်စုံ ထည့် သွင်းစဉ်းစားပြီး၊ ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲပုံကအစ ခွဲဝေထားဖို့ စဉ်းစားနေကြပါတယ်။ "ဘရာတစ်စ်လာဗာ (Bratislava) ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်နှင့် မကြာသေးမီက အခြားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များအရ မသန်မစွမ်း သူများ အပြည့်အဝ ပါဝင်ဆောင်ရွက် ခွင့် မရှိလျှင်၊ ထောင်စုနှစ်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်များ ပြည့်မီရန် အကြောင်းမရှိပါ" ဆိုပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေ မှာ မသန်မစွမ်းသူတွေလည်း အခြားလူများနည်းတူ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခွင့် ရစေဖို့ တောင်းဆိုနေကြတယ်။ စီမံကိန်းတွေရဲ့ ဘတ်ဂျက် ၅% ကို မသန်မစွမ်းသူတွေအတွက် လျာထားဖို့ တောင်းဆိုနေကြတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေမှာ မသန်မစွမ်းဆိုတာလေးများ ပါမလားလို့ လိုက်ရှာကြည့်မိတယ်။ ၂-ပိုဒ်တော့ တွေ့ ပါတယ်။
အခန်း ၁။ နိုင်ငံတော် အခြေခံမူများ၊ အပိုဒ် ၃၂ (က)။ နိုင်ငံတော်သည် မိခင်နှင့် ကလေးသူငယ်များ၊ မိဘမဲ့ကလေးများ၊ ကျဆုံးသော တပ်မတော်သားများ၏ ကလေးများ၊ အိုမင်းမစွမ်းသူများ၊ မသန်မစွမ်းသူများ အား ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရမည်။
(ခ) မသန်မစွမ်းဖြစ်လာသော တပ်မတော်သားများအား သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ နေထိုင်စားသောက်နိုင်ရန် နှင့် အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းပညာကို အခလွတ်သင်ယူနိုင်စေရန် စီမံဆောင်ရွက်ရမည်။
အခန်း ၇၊ တပ်မတော်၊ အပိုဒ် ၃၄၄။ "မသန်မစွမ်းဖြစ်သွားသော တပ်မတော်သားများနှင့် သေဆုံး သို့မဟုတ် ကျဆုံးသော တပ်မတော်သားများ၏ မိသားစုများအား ထောက်ပံ့စောင့်ရှောက်ရေးအတွက် ဥပဒေပြဌာန်း ပေးရမည်။" ဆိုတာတွေ့ရ တယ်။ ကျန်တဲ့အခန်းတွေမှာတော့ လုံးဝ မတွေ့ရဘူး။ "နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များ" ဆိုတဲ့ အခန်း-၈ မှာလည်း မသန်မစွမ်းဆိုတာ တပါဒမျှတောင် မတွေ့ရပြန်ဘူး။
တခါ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း (၁၅) "အထွေထွေပြဌာန်းချက်များ"။ အပိုဒ် (၄၅၁) မှာ နိုင်ငံတော် သည် ဥပဒေပြုတွင် လည်းကောင်း၊ အုပ်ချုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော် အခြေခံမူများနှင့်အညီ အလေး ဂရုပြု ဆောင်ရွက်ရမည်။ သို့ရာ တွင် ထိုသို့ဆောင်ရွက်စေရန် မည်သည့်တရားရုံးတွင်မျှ တရားစွဲဆိုခွင့် မရှိစေ ရ" ဆိုပြီး တံခါးပိတ်ထားပြန်တယ်။ မသန် မစွမ်း လူ ၃ သန်းအရေးအတွက် သွားပါလေရော...။ သူတို့အရေး ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ပျက်ကွက်ပြန်ရင်လည်း အစိုးရကို တရားစွဲဆိုဖို့ အကြောင်းမရှိတော့ဘူးလေ။ မသန်မစွမ်း သူတွေဟာ နိုင်ငံသားတွေမှ ဟုတ်ပါလေစ။ ကောင်းကြပါလေရော... ။
၁၁ မတ်လ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်။
၁။ Htet Aung, Torn between Two Capitals, Irrawaddy News online, September 15, 2010.
၂။ မျိုးသန့်၊ ဆင်းရဲသား အခမဲ့ဆေးကုနိုင်ခွင့် ပယ်ချခံရ၊ မဇ္ဈိမသတင်းဌာန အွန်လိုင်း၊ မတ် ၁၀၊ ၂၀၁၁။ http://www.mizzimaburmese.com/news/inside-burma/7086-2011-03-10-13-22-56.html
၃။ Cherry Thein, Disabled advocacy group expands national network, Myanmar Times, Nov 15-21, 2010
၄။ Nyein Zaw Lwin and Ei Thin Zar Kyaw, Most of Myanmar disabled persons are between the ages of 16 and 65, Eleven Weekly News, http://eversion.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1086:most-of-myanmar-disabled-persons-are-between-the-ages-of-16-and-65&catid=42:weekly-eleven-eversion&Itemid=109
၅။ UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Rights_of_Persons_with_Disabilities
၆။ Country Report on Disability (Myanmar), JICA. http://siteresources.worldbank.org/DISABILITY/Resources/Regions/East-Asia-Pacific/JICA_Myanmar.pdf
၇။ မသန်မစွမ်းသူများ အပါအ၀င်ဖြစ်သည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဘုံရပ်တည်ချက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် http://www.genevacall.org/resources/research/f-research/2001-2010/2011_GC_BURMA_Landmine_RPT_CD-Rom_ENG.pdf
၈။ တပ်မတော်အစိုးရ လက်ထက် နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှတ်တမ်း